China emeela ka iwu sie ike na mbupụ | Sinnovation
China emeela ka iwu sie ike na mbupụ
E mere ka ndị ahịa na-ahụ maka nlekọta ahịa na nchịkwa nchịkwa nke obodo Weifang mata na, na nzaghachi maka ụkọ oke nke mkpuchi mkpuchi ọrịa na uwe nchebe na ahịa na nsogbu nke mgbanwe mgbanwe nke ụlọ ọrụ, Weifang Quality Inspection Institute meghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka nyocha mberede, yana ndị isi. otu ụlọ akwụkwọ ahụ mere ka ndị nyocha ndị ọkachamara banye n'ọgbọ agha iji nyere aka merie ọgụ ahụ megide ọrịa ahụ.
Ndi otu ndi mmadu guzobere site na nlekota oru nke obodo, nyocha na igbochi oria oria nke ndi otu, ya na ndi otu ndi otu ka ndi isi, bara uru nye ndi nwere uche, ikike siri ike nke ndi oru nyocha, ndi mmadu na achoputa ihe ndi ozo, rue ndi mmadu ato. na-echebe uwe, 1 disinfectant mmepụta ụlọ ọrụ mụụrụ a nlele nnyocha, nnyocha nke ihe karịrị 15 ogbe dị, anya, na "atọ mgbanwe", ndị mmadụ agbaji igwe bụghị jehiel, na-agbalịsi ike na nke kasị nso oge, oru oma, na nkà mmụta sayensị na ezi ule ngwaahịa akụkọ e zigara n'aka ụlọ ọrụ ahụ.
N'otu oge ahụ, mejuputa njikwa ahịa iji hụ na ngwaahịa na nchekwa dị mma maka njikwa ngwaahịa, rụọ ọrụ dị mma n'ichezi ụlọ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa, mmepụta, nyocha nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ mkpuchi dị elu, Seth nke dị elu. echebe uwe factory, zhucheng tightsen disinfectant atọ ụlọ mmepụta ihe karị na ngwaahịa mma elekọta pesonel, mmejuputa iwu-nke ngwaahịa nlekọta, 24 awa a ụbọchị nke akụrụngwa, àgwà nke ngwaahịa na ahịa enterprise niile na-gburugburu elekọta, hụ na ihe izute ụkpụrụ niile dị mkpa, ma dozie njem njem ihe onwunwe, ụkpụrụ ụlọ ọrụ na nsogbu ndị ọzọ bara uru.
Ndị nyocha n'ọhịa n'ime shandong ịhụnanya nke ngwaahịa ọgwụ co., Ltd., shandong xin cosette Marine biological technology co., LTD., Obodo mgbanwe, ụlọ ọrụ ise dịka ngwaahịa ndị na-abụghị ndị a kpara akpa, LTD. Zipu ọrụ n'ọnụ ụzọ, nke onye na-eku ume ume maka ụlọ ọrụ mbupụ, n'okpuru ntiwapụ nke ọchịchọ, nlekọta obodo, ndị otu nyocha iji nyere ndị ụlọ ọrụ aka ngwa ngwa (ndị na-emepụta ngwaahịa ụlọ, ma chepụta ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị, n'ikwekọ n'ahịa chọrọ nke ọkọlọtọ , yabụ mee ka ngwa ọrụ ahụ ruru eru inweta ngwa ngwa n'ahịa ahụ.